Sun, Jul 12, 2020 at 5:35pm
फेब्रुअरी ४ अर्थात् मंगलबार फेसबुक १६ वर्ष पुगेको छ। सन् २००४मा स्थापना भएको फेसबुकले छोटै समयमा विश्वभरीका अधिकांश मानिसहरुलाई जेडेको छ।
फेसबुकले भौतिक रुपमा टाढा रहेका आफ्ना आफन्तसँग भर्चुअल रुपमा भेट्न मात्रै सजिलो बनाएन, यसले जीवनका महत्वपुर्ण घटनाहरुलाई पनि कैद गरेर राख्न र सबैलाई देखाउन समेत सहयोग गर्यो।
मानिसका दैनिक कृयाकलाप र इतिहासलाई समेत कैद गर्न सहयोग गरेको छ। अहिले फेसबुकमा फोटोदेखि भिडियो तथा समाचार सम्म हेर्न तथा पढ्न मिल्ने सुविधा दिइएको छ।
सुरुवातमा यसलाई ‘द फेसबुक’ नाम दिइएको थियो। त्यतिबेलादेखि नै फेसबुकमा साथी बनाउनेदेखि फोटो र भिडियो पोस्ट गर्न मिल्ने सुविधा थियो।
फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई गीत सुन्ने सुनाउने सुविधा पनि दियो। तर, सुरुवातको एक वर्षमै अर्थात् सन् २००५ मा यसको नाम फेरेर फेसबुक बनाइयो।
सन् २०१३ देखि २०१४ सम्ममा फेसबुकले करिब ४० देशको मोबाइल कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गरिएको देशमा फेसबुक निःशूल्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भयो। तर सन् २०१६ मा फेसबुकले उक्त सम्झौता खारेज गरिदियो।
फेसबुक भन्ने वित्तीकै यसको रंगको पनि चर्चा हुने गर्छ। उसले निलो रंगलाई आफ्नो ब्रन्ड नै बनाइसकेको छ। फेसबुका संस्थापक तथा सिइओ मार्क जुकरबर्गलाई कलर ब्लाइन्डनेसको समस्या छ। उनी रातो र हरियो रंग चिन्न सक्दैनन्। तर, निलो रंग भने उनी रम्रोसँग चिन्न सक्छन्। त्यसैले उनले आफ्नो उत्पादनमा पनि निलो रंग प्रयोग गरेका थिए।
तपाई फेसबुकमा कति सक्रिय हुनुहुन्छ? दिनमा कतिवटा फोटो वा स्टाटस पोस्ट गर्नुहुन्छ? तपाईलाई थाहाँ छ, फेसबुकमा हरेक १५ मिनटमा ४ करोड ८० लाख भन्दा बढी पोस्ट हुन्छ।
फेसबुकको तथ्यको बारेमा गरिएको अध्यायनअनुसार हरेक १० मिनटमा एक लाख भन्दा बढी फ्रेन्ड रिक्वेस्ट र एक मिनटमा पाँच लाख भन्दा बढी लाइक र एक दिनमा करिब ३ करोड ५० लाख फोटो पोस्ट हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
यतिमात्रै होइन अहिलेसम्म फेसबुकमा २ अर्ब ५० करोड प्रयोगकर्ता जोडिएका छन्। देशको हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भारतीयहरु छन्।